Tue, Jul 14, 2020 at 1:44am
चितवन, २४ भदौ भ्रमण वर्ष २०२० मा पर्यटक बढाउने र बसाइँ लम्ब्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० जिल्लास्तरीय सहजीकरण तथा आयोजक समितिले सरोकारवालाको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमसहित भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन तयारी थालेको हो । समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार सरोकारवालाको सहभागितामा ७१ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सोही समितिबाट तीन उपसमिति..
अर्घाखाँची, २३ भदौ । नेपालमा पाइने चराका ८८६ प्रजातिमध्ये डंगर गिद्ध अति सङ्कटापन्न (लोप हुने) अवस्थामा छ । हाल नेपालमा डंगर गिद्धको सङ्ख्या २ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । सन् १९९० को दशकमा दक्षिण एशियामा करोडौं र नेपालमा लाखौंको सङ्ख्यामा पाइने गिद्ध झण्डै ९५ प्रतिशतले घटी हिजोआज केही हजारमा सीमित हुन पुगेको छ । विश्वमा २३ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन् भने दक्षिण..
वालिङ, २२ भदौ स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकास्थित घ्वाङखोलालाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिएको छ । वालिङ नगरपालिकाअन्तर्गत ८ र १० नम्बर वडामा अवस्थित घ्वाङखोलामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेसँगै धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले महत्वको क्षेत्र बन्दै गएको हो । वालिङ नगरपालिकाको मुख्य बजार वालिङबाट झण्डै तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको घ्वाङखोलासम्म पुग्न सडकको सहजता छ । स्थानीयवासीले बिहानीपख..
महोत्तरी, २१ भदौ प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले कृषि, उद्योग र पर्यटन विकास समृद्धिको मुख्य आधार रहेको बताउनुभएको छ । बर्दिवासमा आज नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासङ्घ प्रदेश २ को प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाली समाजको विविधतालाई अवसरका रुपमा उपयोग गरी समृद्धि र विकासको बाटो पहिल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रुपले नेपाल वैभवशाली भए..
बागलुङ, २१ भदौ गण्डकी प्रदेशले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष (सन् २०१९–२०२२) सफल पार्न जिल्लास्तरीय समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको उपस्थितिमा उपसमिति घोषणा गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिको उपाध्यक्षमा जिससका उपप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल रहनुभएको छ । पदेन सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्री, उद्योग वाणिज्य सङ्घका..
काठमाडौँ, २० भदौ तपाईं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलतर्फ अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ भने खुसीको खबर छ । अब, जहाजबाट ओर्लेपछि लगेजका लागि घण्टौँसम्म लाइनमा बसेर झञ्झट बेहोर्नुपर्ने छैन । विमानस्थल कार्यालयले नेपालमै पहिलो पटक आन्तरिक टर्मिनलमा ‘कन्भेयर बेल्ट’ सेवा शुरु गरेको हो । बेल्टको शुभारम्भ गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक विमानस्थलको सेवा स्तरोन्नतिको नयाँ थालनी भएको र यसलाई..
पेरिस(फ्रान्स), २० भदौ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने युरोपेली मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सकेमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने देखिन्छ । युरोपेली मुलुकहरुबाट सन् २०१८ मा दुई लाख ४३ हजार २८४ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने यस वर्षको छ महीनाको अवधिमा यो सङ्ख्या एक लाख चार हजार ७८३ रहेको..
काठमाडौँ, १९ भदौ निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सले ‘सगरमाथा हिमाल सफाइ अभियान–२०१९’ अन्तर्गत सगरमाथा क्षेत्रबाट थप ३० टन पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहर सङ्कलन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसअघि सफाइ अभियानका साझेदार संस्थाको सहयोगमा उक्त क्षेत्रबाट ४५ टन पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहर सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ । यती एयरलाइन्सले भगिनी संस्था तारा एयरमार्फत सफाइ अभियानका साझेदार संस्था..
भरतपुर, १८ भदौ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आज देवघाटधामको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । उहाँले देवघाटधामको अवलोकनसँगै निर्देशनसमेत दिनुभएको हो । मन्त्री भट्टराईले देवघाटको विकासमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको समन्वयमा देवघाटको विकास गर्नुपर्छ, मन्त्रालयका तर्फबाट सक्दो सहयोग हुन्छ ।” उहाँले छिट्टै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र मन्त्रालयबीच देवघाटको विकासका लागि..
गलकोट, १७ भदौ । बागलुङमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको भूमिगत सङ्ग्राहलय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालग्राम लोप हुन थालेपछि संरक्षणका लागि भू–गर्भभित्र सुरुङ निर्माण गरी सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न थालिएको थियो । सङ्ग्रहालय निर्माण अन्तिम चरणमा छ । निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको सङ्ग्रालयको सुरुङ हेर्न तथा मन्दिर अवलोकनका लागि दैनिक २०० देखि ३०० पर्यटक आउन थालेका छन् । करिब..
चितवन, १६ भदौ । यस वर्ष गैँडा गणना आगामी चैतमा हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दाताको भर पर्दा गैँडा गणना गर्न सकिएको थिएन् । गैँडा गणनाका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बजेट विनियोजन गरेको छ । चितवन, पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा रहेका छन् । ती सबै निकुञ्जमा गैँडा गणना एकसाथ गरिने छ । विभागका उपमहानिर्देशक..
काठमाडौँ, १५ भदौ । प्रदेश २ सरकारले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूखहरू काट्न नदिने भएको छ । विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरू खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई सुझाउने उसको तयारी छ । प्रदेशमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा..
भोजपुर, १४ भदौ ‘पर्यटन वर्ष २०२०’लाई सफल बनाउन भोजपुरको ‘मुन्दुम ट्रेल’ महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्छ । नेपाल सरकारले छानेका १०० पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये यो ट्रेल पनि समेटिएको छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेका ठाउँको भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटक वर्षेनी हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिने गर्छन् । तीमध्ये धेरैजसो लेक लाग्ने समस्याले उच्च हिमाल, पहाड चढ्न नसक्ने तर हिमाललाई नजिकबाट हेर्न चाहाने पर्यटकलाई उपयुक्त हुनेगरी..
चितवन, १३ भदौ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा भाले गैँडा मरेको छ । निकुञ्जको मेघौली क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नियन्त्रण मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैँडा मृतावस्थामा फेला परेको हो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालका अनुसार अन्दाजी ३५-४० को गैँडा भदौ ११ गते मृतावस्थामा भेटिएको हो । गैँडा बूढो भएर कालगतिले मरेको अनुमान गरिएको छ । गैँडाको आयु सामान्यतया ३५ देखि ४० वर्ष..
दमौली, १३ भदौ । गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष २०१९ लाई सफल बनाउन सबै जिल्लामा उपसमिति गठन गरिने भएको छ । सन् २०१९ मा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सफल बनाउन ११ जिल्लामा जिल्लास्तरीय उपसमिति गठन गर्न लागिएको हो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र मिलेर १५ लाख पर्यटक गण्डकी प्रदेशमा खासगरी पोखरा..
भरतपुर,१२ भदौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले भरतपुर विमानस्थललाई काठमाडौँ बाहिरको वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा बिहिबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भरतपुर विमानस्थललाई रात्रिकालीन बनाउने, धावनमार्ग थप गर्ने, ट्रमिनल भवन आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने जानकारी दिनुभयोे । नेपालभरका विमानस्थलको स्तर वृद्धि गर्ने तयारी भएको भन्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यका नजिकै रहेको यो विमानस्थलको विस्तार छिटो..
बलेवा, १० भदौ । न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिलाई दैनिक जीवन यापन गर्न कत्ति असहज होला ? यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ लामो दूरी र ठूलठूला पहाड चढ्ने कुरा त अधिकांश मानिसहरुका लागि कल्पना बाहिरको कुरा हो । तर न्यून दृष्टियुक्त भएर पनि अमिट केसी विश्वकै सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने सपना देखि रहनुभएको छ । दुई वर्ष पहिले सगरमाथाको आठ हजार मिटर..
काठमाडौं, ९ भदाै । ७० वर्षमाथिका वृद्ध-वृद्धाले आन्तरिक हवाइ उडानमा ५० प्रतिशतसम्मकाे छुट पाउने भएका छन् । सरकारले ७० वर्ष उमेर कटेका नागरिकलाई आन्तरिक हवाइ उडानमा ५० प्रतिशत छुट दिने घाेषणा गरेकाे हाे । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्ने पनि उनले बताए । यसैगरी विमानस्थलको सुरक्षामा ध्यान दिँदै भीआईपीका स्वागत र..
चितवन, ७ भदौ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाल अर्ना र बाह्रसिङ्गे रहेको ठाउँ विस्तार गरी ती वन्यजन्तु थप गरिने भएको छ । निकुञ्जको पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा विसं २०७३ मा खुला खोर निर्माण गरी अर्ना र बाह्रसिङ्गे ल्याइएको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालका अनुसार खोर विस्तारका लागि निकुञ्ज विभागले रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हाल २२ हेक्टर..
इनरुवा, ६ भदौ । अर्नाका लागि प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा रहेका कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एक वर्षमा १८ हजार ७७३ जना पर्यटकले अवलोकन गरेका छन् । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित पश्चिमकुशाहामा रहेको कोशी टप्पुमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सो सङ्ख्यामा पर्यटकले अवलोकन गरेको आरक्षका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा आरक्षमा १८ हजार ३८५ नेपाली, ३६ सार्क मुलुकका र ३५२ विदेशी गरी..
वीरगञ्ज, ४ भदौ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका दुर्लभ वन्यजन्तुको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएपछि यसको सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ । पथलैया अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा रहेको निकुञ्जको ‘कोर’ क्षेत्रमा राजमार्ग भएकाले सवारी साधनको आवागमन अत्यधिक भएकाले सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएकाले यसको सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको हो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय आधाभार बाराका अनुसार आर्थिक वर्ष..
न्यूयोर्क, ३ भदौ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचार अमेरिकाको न्यूयोर्कमा पनि गरिएकाे छ । मंगलबार न्यूयोर्कमा आयोजित ब्लक पार्टी, स्ट्रिट फेस्टिभलमा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गरिएको हाे । क्वीन्स नेप्लिज लायन्स क्लबले फेस्टिबलमा स्टल राखेर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचार गरेको हो । कार्यक्रममा नेपालको परिचयका साथै भ्रमण वर्षबारे पर्चा, पम्प्लेट र पुस्तिका समेत वितरण गरिएको क्वीन्स नेप्लिज लायन्सका अध्यक्ष..
नेपाल वायु सेवा निगमले अब काठमाडौँबाट सोझै जापान उडान गर्ने
काठमाडौँ, ३ भदौ । नेपाल वायु सेवा निगमले एअरबस- ३३०- २०० ठूलो जहाजबाट नेपाल- जापान उडान भर्न लागेको हो । निगमले अगस्ट २९ (भदौ १२ गते)बाट काठमाडौं- ओसाका (जापान) सीधा उडान भर्ने भएको छ । निगमले सातामा तीन पटक उडान भर्ने गरी नयाँ रुट तय गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक मदन खरेलले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । उडानको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको उनको..
मानसरोवर यात्राका गर्ने क्रमममा एक तीर्थयात्रुको मृत्यु
रसुवा, २ भदौ । मानसरोवर यात्रा गर्न गएकी एक भारतीय महिला तीर्थयात्रुको लेक लागेर निधन भएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता गोकर्ण थापाका अनुसार मृत्यु हुनेमा भारतको प्रान्त नखुलेको ५५ वर्षीया अर्चना जयप्रकाश मिश्र हुनुहुन्छ । मानसरोवर जानेक्रममा चिनियाँ भूभागमा यही भदौ १ गते उहाँको निधन भएको थियो । ती यात्रुको शव आज बिहान ११.२० बजे रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्र्याइसकेकाले परीक्षणका लागि हेलिकप्टरद्वारा..
कञ्चनपुर, १ भदौ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० सफल बनाउनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रचार सामग्री राख्न थालेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी नगरपालिकाका क्षेत्रका सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार राखिएका छन् । पश्चिमी नाकामा गडडाचौकीमा पर्यटकलाई हार्दिक स्वागतसहितको ठूलो प्रचार सामग्रीसहित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुल, रौटेला, विष्णु मन्दिर धाम, झिलमिलालगायतका पर्यटकीयस्थलमा प्रचार सामग्री राखिएका..
चन्द्रागिरिमा १ करोड लागतमा ‘मदन भण्डारी स्मृति पार्क’ बन्ने
काठमाडौँ, ३२ साउन चन्द्रागिरि नगरपालिका–१३ मा ‘मदन भण्डारी स्मृति पार्क’ निर्माण हुने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपालिकाको साझेदारीमा उक्त उद्यान निर्माण हुन लागेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको रु एक करोड तथा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको रु एक करोड लागतमा उक्त उद्यान बन्न लागेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले जानकारी दिनुभयो । “काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रत्येक नगरपालिकालाई पार्क निर्माणका लागि रु एक करोड..
सरकारले माग्यो भ्रमण वर्ष २०२० का लागि निजी क्षेत्रसँग कार्यक्रमको प्रस्ताव
काठमाडाैं, २९ साउन । सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० का लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने किसिमका कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको छ । भ्रमण वर्ष २०२० सचिवालयले सूचना जारी गर्दै निजी क्षेत्रसँग भ्रमणसम्बन्धी कार्ययोजनाको प्रस्ताव मागेको हो । सभा–सम्मेलन, सेमिनार, अन्तरक्रिया, प्रदर्शनी, मेला, उत्सव–महोत्सव, परिचयात्मक भ्रमण, विशेष जात्रा एवम पर्वजस्ता गतिविधि सञ्चालनमा सचिवायले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा पनि..
खलङ्गा, २८ साउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको खस सङ्ग्रहालय निर्माणमा सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतसहितको टोलीसँग काठमाडौँमा उहाँले सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि आर्थिक अख्तियारी छिट्टै पठाइ दिने बचन दिनुभएको हो । उहाँले खस सभ्यता संरक्षणका लागि भए पनि सिञ्जा सङ्ग्रहालय आवश्यक भएको बताउनुभयो । सो टोलीले पर्यटन मन्त्रालयमै..
काठमाडौँ, २८ साउन । मध्य मनसुनको धमिलो पानी अनि गड्गडाउँदो भोटेकोसीमा ¥याफ्टिङ । ¥याफ्ट बोटसँगै यात्रु नदीको छालसँग सङ्घर्ष गर्दै अनि मजा लिँदै बग्न थाले । ती ¥याफ्टिङ बोटहरूभन्दा अघिअघि एक्लै एकप्रकारको सानो डुङ्गा कायकमा एकजना महिला तैरिरहनुभएको थियो । महिला शोभा मगरमा सबैको आँखा परिरहेको थियो । ¥याफ्टिङमा जानेहरू अचम्ममा परे । त्यस्तो गड्गडाउँदो भोटेकासीमा एक्ली किशोरी ? खासमा ¥याफ्टिङमा सुरक्षा दिन..
डोटी, २६ साउन कुनै बेला निगालोको जङ्गलका रुपमा चिनिँदै आएको खप्तड क्षेत्रलाई पछिल्लो समय प्राकृतिक बरदान भन्दै सुदूरपश्चिमका जनता संसारभरि चिनाउन लागिपरेका छन् । सुदूरपश्चिमको भू–स्वर्गका मानिने यस क्षेत्रलाई देश विदेशमा चिनाउन यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सङ्घ संस्था सक्रिय छन् । आध्यात्मिक र असाधारण तपस्वीका रुपमा चिनिने खप्तड बाबाले सुदूरपश्चिमका चार पहाडी जिल्लाको सिमानामा पर्ने खप्तड क्षेत्रलाई ‘भू–स्वर्ग’को उपनाम दिएर संसारभर प्रचार..
Results 1048: You are at page7of 35